About us - Dongguan Weldo nemazvo machine Co., Ltd.
Dongguan Weldo chaiyo machining Co, Ltd. inogadzira yakasimbiswa ne ISO 9001, yakagadzwa muna 2008. Kubva pakagadzwa, yave makore gumi nematatu, isu tave tichinamatira pakutenda kwekambani kubva pakutanga kwekugadzwa, kwakanyanya tekinoroji, mutengi chekutanga.
Isu takavimbika kugadzira mupi muiyi ndima. Isu tasimbisa mukurumbira mukurumbira mukuongorora kwehunhu, sevhisi, mushure mekutengesa uye kushandisa, uye nemidziyo yepamberi, iyo yakaisa hwaro hwakasimba hweshoko-remuromo revatengi vedu.
Nzvimbo yekugadzira iri muDongguan, guta rine mukurumbira pasi rese. Dongguan ndechimwe cheakakura ekugadzira zvigadziko pasi zvine simba rekugadzira simba uye yakazara maindasitiri system. Kambani yedu ine anopfuura mazana matanhatu emamirimita emamirimita emiti, ichinyatsoita nemazvo CNC michina yekushandisa uye OEM, ODM zvikamu zvegungano masevhisi.
Iyo yekugadzirisa michina inosanganisira akawanda emhando yepamusoro-chaiyo CNC michina nzvimbo, CNC lathes, lathes, yekugaya michina, yekugaya michina, waya kucheka, nezvimwewo, uye zvakare yakatumira yakakwira-chaiyo yekuyedza yekuyedza michina senge CMM, altimeter uye projekita.
Vatengi vedu vari muAsia, North America neEurope. Isu takazvipira kuburitsa uye kugovera yakakwira mhando chaiyo yekugadzirisa CNC zvikamu zvevatengi pasi rese. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mukurapa, semiconductor, michina uye mamwe maindasitiri.
Tine timu yekutungamira matarenda vanoziva ruzivo rwehunyanzvi rweyakakodzera michina uye zviridzwa, uye vatungamire vashandi vehunyanzvi kuti vakwanise hunyanzvi hwekushandisa, uye manejimendi bhizinesi nesainzi, iri mukukura kwakanaka.
Tine nyanzvi timu yeinjiniya uye vane hunyanzvi vashandi, takagara tichikumbira vashandi vehunyanzvi kuti vave nepamusoro pekugadzirisa nzira uye vashandise yakaoma uye yakaoma tekinoroji kuti vawane migumisiro iri nani. Nesimba redu rese uye nechido, isu tinotarisana nekupa vatengi vane hunyanzvi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye uve wako waunovimba naye. Kutarisira mberi kune kubvunzana kwako.
Iine yakavimbika yakanaka mhando sisitimu, yakakura kumira uye yakakwana rutsigiro rwevatengi, akateedzana ezvigadzirwa uye mhinduro zvinogadzirwa nesangano redu zvinotumirwa kune yakati wandei nyika nenzvimbo Tichiomerera kune bhizinesi musimboti wekubatsirana mabhenefiti, isu takunda mukurumbira wakanaka pakati pevatengi vedu nekuti yemasevhisi edu akakwana, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mitengo yemakwikwi. Tinogamuchira noushamwari vatengi kubva kumba uye kunze kwenyika pamwe nesu pamwe zvakafanana kubudirira.
Tinotarisira kuti tinogona kusimbisa kushandira pamwe kwenguva refu nevatengi vese, uye tinovimba kuti tinogona kunatsiridza kukwikwidza uye kubudirira kuhwina-kuhwina mamiriro pamwe nevatengi. Tinogamuchira nemoyo wese vatengi kubva pasirese kuti tibate isu chero chaunoda! Gamuchirai vese vatengi vese kumba nekune dzimwe nyika kushanyira fekitori yedu. Isu tinoshuvira kuve ne kuhwina-kuhwina bhizinesi hukama newe, uye kugadzira ramangwana riri nani.